Pokémon GO 0.131.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
စတိုးမွ ေဒါင္းလုပ္မ်ား 500k - 3M
ဗားရွင္း 0.131.2 လြန္ခဲ့ေသာ9လက
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း Pokémon GO
Pokémon GO ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ပိုကီမွန် GO ယခုလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်း, မိတ်ဆွေများထည့်သွင်းလက်ဆောင်များပို့ခြင်းနှင့်ဆုကြေးငွေသော့ဖွင့်အသစ်တစ်ခုချစ်ကြည်ရေးအဆင့်စနစ်တွင်ပါဝင်သဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းလူမှုရေးနှင့်ကုန်သွယ် features တွေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သင်တန်းဆရာယခုပိုကီမွန်လက်ခံရရှိများအတွက် Candy အပိုဆုဝင်ငွေ, အနီးနားရှိအခြားသင်တန်းဆရာတွေနဲ့ပိုကီမွန်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။
သူတို့ကသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းအဖြစ်ပိုကီမွန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူကမ္ဘာလုံးအနှံ့လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းကို Join ။ ပိုကီမွန် GO သန်း 800 ကျော်ကြိမ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်များနှင့် TechCrunch က Game Developers ရွေးချယ်မှုဆုပေးပွဲနှင့် "တစ်နှစ်တာ၏အကောင်းဆုံး App ကို" က "အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်း" အမည်ရှိထားပြီးကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂိမ်းအာရုံဖြစ်ပါတယ်။
Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu နဲ့တခြားပိုကီမွန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လေပြီတကား
ပိုကီမွန်ထွက်ရှိပါတယ်, သင်ကသူတို့ကိုတွေ့ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးရပ်ကွက်အတွင်းပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်အဖြစ်ပိုကီမွန်အနီးအနားမှာရှိမယ့်အခါ, သင့်ရဲ့ smartphone ကိုတုန်ခါစေမည်။ ရည်ရွယ်ထား ယူ. ပစ်တဲ့ Poke Ball ကို ... သင်ကတပ်လှန့်နေရပါလိမ့်မယ်, သို့မဟုတ်ပါကပယ်ရှားရလိမ့်မယ်!
အချို့သောပိုကီမွန်ရေကန်များနှင့်သမုဒ္ဒရာအားဖြင့်ရေ-type အမျိုးအစားပိုကီမွန်ဘို့မိမိတို့ဇာတိပတ်ဝန်းကျင်-ကြည့်အနီးပေါ်လာပါသည်။ PokéStopsသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြတိုက်, အနုပညာတပ်ဆင်, သမိုင်းအမှတ်အသားများနှင့်အထိမ်းအမှတ-မှ Poke ဘောလုံးနှင့်အထောက်အကူပစ္စည်းများအပေါ်တက်စတော့ရှယ်ယာများကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနေရာများမှာ gyms-တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
, Catching hatching, ဖြစ်ပေါ်နေသောနှင့်ပိုပြီး
သငျသညျထမြင့်အမျှ, သင်သည်သင်၏ပိုကီဒက်ဖြည့်စွက်ဖို့ပို-အစွမ်းထက်ပိုကီမွန်ဖမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်လမ်းလျှောက်သည့်အကွာအဝေးပေါ်အခြေခံပြီးပိုကီမွန်ကြက်ဥ hatching အားဖြင့်သင့်စုဆောင်းခြင်းမှထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပိုကီမွန်တူကြင်နာအများအပြားဖမ်းခြင်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲကူညီပါ။ အတူလမ်းလျှောက်သင်သည်သင်၏ပိုကီမွန်ခိုင်မြဲအောင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု Candy ဝင်ငွေမှတစ်ဦးကို Buddy တယောက်ပိုကီမွန်ကိုရွေးချယ်ပါ။
သငျသညျသုံးသင်းနှင့်သင့်အခြမ်းမှာသင့်ရဲ့ပိုကီမွန်နှင့်အတူ gyms ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်စစ်တိုက်ရာတစျခုပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ Charmander Charmeleon ပြီးတော့ Charizard မှတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသကဲ့သို့, သင်တစ်ဦးအားကစားရုံအနိုင်ယူအပေါင်းတို့နှင့်နေရဆဲဆန့်ကျင်ပါကခုခံကာကွယ်ဖို့သင့်ရဲ့ပိုကီမွန် assign လုပ်ဖို့အတူတူတိုက်ဖျက်ပေးနိုင်သည်။
အစွမ်းထက်ဝင်ရောက်စီးနင်း Boss ကိုအနိုင်ယူဖို့ရေးအဖွဲ့တက်
တစ်ဦးကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ပွဲဟာဝင်ရောက်စီးနင်းသူဌေးကအဖြစ်လူသိများကာအလွန်အစွမ်းထက်ပိုကီမွန်အနိုင်ယူဖို့အထိ 20 နဲ့အခြားလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရန်သင့်အားအားပေးကြောင်းသမဝါယမဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတိုကျပှဲတှငျကအနိုင်ယူပြီးအတွက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုလျှင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ခုအပိုအစွမ်းထက်ပိုကီမွန်ဖမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်လိမ့်မယ်!
ဒါဟာရွေ့လျား-သင့်ရဲ့ Real-ဘဝ Adventures စောင့်ဆိုင်းရရန်အချိန်ပဲ!
- ဤ app ကိုအခမဲ့-to-play စသည်နှင့် In-ဂိမ်းဝယ်ယူမှုပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာစမတ်ဖုန်းမဟုတ်တက်ဘလက်များအတွက် optimized ဖြစ်ပါတယ်။
- 2GB RAM ပါသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရှိသည်နှင့်အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်း 4.4-7.0 + ကို install ရှိသည်သော Android ထုတ်ကုန်တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့။
- အသုံးပြုပုံများသာကို Wi-Fi ကွန်ယက်သို့ချိတ်ဆက်ထားကြသည် GPS စနစ်စွမ်းရည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းတွေမပါဘဲ device များအတွက်အာမခံချက်မပေးပါ။
- သူတို့က installed သဟဇာတ OS ဗားရှင်းများပင်လျှင်လျှောက်လွှာအချို့ကိရိယာများပေါ်တွင် run နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
- အပိုဆောင်းလိုက်ဖက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များအတွက် www.PokemonGO.com သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
- ဇွန်လ 18, 2018 အဖြစ်ပြန်ကြားရေးလက်ရှိ။
- အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းကြိုဆိုပါ၏! တစ်ဦးသင်တန်းပေးသူကလေးတစ်ဦးလျှင်ဒါပေမယ့်မိဘသဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ အသေးစိတ်ကိုဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုပါ။
Pokémon GO အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Pokémon GO အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Kyal Sin Tun
လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
dwiko-lukito စတိုး 158.66k 64.95M
Pokémon GO ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ စြန္႕စားခန္း အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Pokémon GO အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.131.2
ထုတ်လုပ်သူ Niantic, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://nianticlabs.com/privacy/pokemongo/en
File Size: 99.05MB
Release date: 2018-12-16 05:30:30
လက်မှတ် SHA1: 32:11:87:99:5B:C7:CD:C2:B5:FC:91:B1:1A:96:E2:BA:A8:60:2C:62
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Unknown
အဖွဲ့အစည်း (O): "Niantic
နိုင်ငံ (C): CA
Pokémon GO APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ